नेपालमै पहिलो पटक बुलेट साइकलको बिक्री धमाधम हुँदै, १८ किलोमिटर प्रतिघण्टा गुड्ने यो साइकलको मुल्य कति ? | DON Nepal नेपालमै पहिलो पटक बुलेट साइकलको बिक्री धमाधम हुँदै, १८ किलोमिटर प्रतिघण्टा गुड्ने यो साइकलको मुल्य कति ? – DON Nepal
Home रोचक नेपालमै पहिलो पटक बुलेट साइकलको बिक्री धमाधम हुँदै, १८ किलोमिटर प्रतिघण्टा गुड्ने यो साइकलको मुल्य कति ?
By Don NepalMar 07, 2018, 18:50 pm0
नेपालगन्जमा नयाँ–नयाँ भेराइटीका साइकल भित्र्याउँदै आएका बागवानले नेपालगन्जमा साइकल लेनको विकास गर्न सकिए प्रदूषण नियन्त्रणमा योगदान हुने बताए ।
नेपालगन्ज पश्चिम नेपालकै प्रमुख साइकल बिक्रीको केन्द्र भएकाले कर्णाली र भेरी तथा राप्तीका समेत अधिकांश जिल्लामा यहीबाटै साइकल जाने गरेको बागवानले जनाएका छन् ।
उनले नाकाबन्दीको समयमा सबैभन्दा बढी साइकल बिक्री गरेको स्मरण गराउँदै अहिले पनि पश्चिम नेपालका ग्रामिण र सहरी क्षेत्रमा समेत साधारण जनताले साइकलनै मन पराउने गरेको दावी गरे । साइकलको आयातमा भन्सार शुल्क अली बढी राखिएकोले ग्राहकलाई महँगो पर्दा समस्या परेको जनाउँदै उनले सरकारसँग धेरै पटक सो बारेमा माग गरिए पनि सुनुवाइ नभएको बताए ।
Previous Postयी बस्तुहरु अरुको कहिल्यै प्रयोग नगर्नुहोस्, तपाइको भाग्य नराम्रोसंग बिग्रन सक्छ Next Postयी हुन् सिनेमा क्षेत्रका ‘हिट’ भनिएका जोडी